Sida Loola socdo Kooxaha Mawduuca SEO, Silos | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Sida Loola socdo Kooxaha Mawduuca SEO, Silos
Sida Loola socdo Kooxaha Mawduuca SEO, Silos
Istaraatiijiyadda isku xirka gudaha ee ku xeeran kooxaha mawduucyada ama silos waxay wanaajin kartaa qaab dhismeedka goobta, caawinta makiinadaha raadinta inay fahmaan waxa ku jira, oo ay wanaajiyaan sida boggaga muhiimka ah ugu darajo sareeyaan natiijooyinka mashiinka raadinta. Laakiin kooxuhu mawduucyadu maaha xeelad dejisan oo la ilaaway. Waxay u baahan yihiin la socodka.
Kutlada mawduucyada ama silos waa xeelado isku xidha gudaha ah si ay uga caawiyaan ganacsiga habaynta macluumaadka (bogagga) boggiisa, iyo, habka, hagaajinta mashiinka raadinta iyo sidoo kale samaynta goobta mid fudud in la dhex maro oo la isticmaalo.
Ficil ahaan, hal bog oo tiir ah ayaa u adeega sida xudunta mawduuca dhammaan boggaga iyo maqaallada la xidhiidha.
Markaa, tafaariiqle online ah ayaa laga yaabaa inuu lahaado mawduuc ku saabsan kabaha shaqada ee haweenka. Bogga kabaha shaqada ee haweenka ee dhexe ayaa u adeegi doona sidii tiirka ama bogga xuddunta oo leh bogag kale oo dib ugu xidhan.
Qaar ka mid ah boggaga ku xidhi kara bogga tiirka "kabaha shaqada ee haweenka" waxaa ka mid ah maqaal ku saabsan sida loo doorto cabbirka saxda ah ee kabaha shaqada ee haweenka ama dood ku saabsan kabaha kabaha ugu fiican ee shaqada dibadda.
Bogga tiirku waa xudunta xudunta u ah ("Kabaha Shaqada Haweenka" ee tusaalahan) oo leh maqaallo taageeraya ama bogag dib ugu xidhaya.
Diirada saarista isku xirka bogga tiirka calaamadaha Googlebot iyo kuwa kale ee gurguurta matoorada raadinta in ay tahay waxa ugu muhiimsan mawduuca oo ay tahay in la helo darajada ugu fiican.
Laakin sidee ku ogaan kartaa in kooxdu ay shaqaynayso?
Sida Loola socdo Kooxda Mawduuca
Marka aad doorato mawduucyada kooxaha suuq-geynta nuxurka ee shirkaddaada oo aad bilowdo inaad abuurto macluumaadkaaga, billow inaad la socoto kooxaha mawduucyada si aad u hubiso inay u dirayaan calaamadaha la rabo matoorada raadinta iyo inay sii ahaato mid joogto ah marka wax cusub lagu daro.
Kooxda mawduuca KPIs. Ka bilow inaad dejiso tilmaamayaasha waxqabadka muhiimka ah ee istiraatiijiyadda kooxeedka mawduucaaga. In kasta oo ay jiri karaan qaar ka mid ah KPI-yada gaarka ah ee bogga tiirka la bixiyay - ie, bogga ururinta rasaasta ayaa cabbiri doona hoggaaminta, halka bogga badeecada ecommerce laga yaabo inuu cabbiro iibka - xeelado badan oo kooxeed mawduucyo ah ayaa ka muuqan doona afarta KPI ee soo socota.
booska darajada. La soco halka uu bogga tiirku kaga jiro natiijooyinka raadinta ereyada muhiimka ah ee khuseeya kooxda mawduuca. Booska darajada waa in la cabbiraa muddo ka dib si kor loogu qaado ama loo ilaaliyo darajada.
Mugga taraafikada dabiiciga ah. Ujeedada SEO waa in la kordhiyo taraafikada goobta. Markaa la soco mugga taraafikada dabiiciga ah ilaa bogga tiirka.
Hawlgelinta Is barbar dhig dhowr cabbir sida heerka bounce iyo waqtiga bogga si aad u go'aamiso haddii nuxurka tiirku uu buuxinayo filashada booqdayaasha.
Beddelaadda. Tani, mar kale, waxaa laga yaabaa inay dhaliso rasaas ama iibin. Si kastaba ha ahaatee, tiirarka mawduucyada waa inay lahaadaan wicitaan-ficil waxayna bixiyaan fursad beddelasho.
Marka lagu daro si joogto ah ula socoshada tusmooyinka laxidhiidha mowduuca-kutlada, isticmaal aaladaha ay ka midka yihiin Cayinta Frog's SEO Spider ama Ahrefs si aad u baadho xiriirinta.
Dhibcaha Isku xirka Caarada SEO. Nooca qaaliga ah ee Screaming Frog's SEO Spider, kaas oo qiimihiisu yahay $200 sanadkii laga bilaabo Noofambar 2019, waxaa ku jira cabbirka falanqaynta gurguurashada ee loo yaqaan 'Link Score'.
Dhibcaha isku xidhkani waxa uu la mid yahay noocyadii hore ee Google's PageRank algorithm laakiin waxa uu si gaar ah diiradda u saaraa isku xidhka gudaha. Diiradadani waxay ka dhigi kartaa qalab waxtar u leh la socodka kooxaha mawduucyada.
Spider-ka SEO wuxuu tilmaamayaa "URL-yada xaqa u leh." Kuwani waa bogag leh xiriirin gudaha ah. Xidhiidhiyayaashan guduhu waxay noqon karaan summada barroosinka, summada canonical, ama natiijada dib u jiheynta.
URL-yada u qalma ayaa markaa la kala saarayaa. "Dhibcaha isku xirka waxa u dhexeeya URL-yada iyadoo lagu salaynayo cilaaqaadka isku xirka." sida ku cad qoraal la soo dhigay website-ka Frog Cayayaanka.
Mawduuca kutlada boggeeda waa in ay ka gaaraan isku xirka dhibcaha sare ee SEO Spider.
URL kasta oo xaq u leh ayaa loo tixgaliyaa markeeda oo waa la cusboonaysiiyay Dhibcaha Isku xidhka. Xiriir kasta oo soo gala wuxuu dhaafaa Dhibcaha Iskuxirka. Waxay ka gudubtaa dhibcaha isku xidhka URL-ka asalka ah, oo loo qaybiyay tirada xidhiidhada dibadda laga keenay. Wadarta dhibcaha isku xidhka URL kasta oo soo gala ayaa markaa la isku daraa oo loo isticmaalaa in lagu dejiyo dhibcaha isku xidhka URLs."
Dhibcaha isku xidhka ee ka soo baxay ayaa lagu soo bandhigay miisaanka logarithmic laga bilaabo 0 ilaa 100. Qalabkan fudud ayaa ku tusi doona boggaga boggaga ugu sarreeya dhibcaha isku xirka. Kooxaha mawduucyada, ujeedadu waa in loo raro dhibcaha bogga tiirka ilaa 100.
Ahrefs Internal Backlinks warbixinta. Qalab kale oo kaa caawin kara la socodka kooxaha mawduucyada waa warbixinta Ahrefs' Internal Backlinks. Waxay tusi doontaa dhammaan bogagga gudaha ee ku xidha mawduuca gaarka ah bogga tiirka kooxda.
Warbixinta Ahrefs' Internal Backlink waxay soo bandhigi kartaa bog kasta oo ku xira bogga tiirka la bixiyay.
Si qalabkani ugu shaqeeyo kooxaha mawduucyada, diiradda saar URL-ka saxda ah ee bogga tiirka oo arag dhammaan natiijooyinka halkii aad u oggolaan lahayd Ahrefs inay kooxeeyaan xiriiriyeyaasha la midka ah.
Warbixintu waxay muujinaysaa wadarta guud ee dib-u-xirayaasha gudaha ee bogga tiirka oo ay la socoto liiska bog kasta oo tixraac ah. Ka shaqaynta liiskan waxay aqoonsan kartaa fursadaha lagu wanaajinayo isku xirka ama lagu ogaan karo boggaga khuseeya ee aan isku xidhin.
Sida loo gooyo, toosiyo oo aan sawiro laga bixin iPad iyo iPhone
Sida loo Beddelayo Tirada Hore ee WooCommerce